Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 19aad | Jowhar Somali News Leader
Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 19aad
Falis farxad ayay joogtay mar haddii uu rabbiga ku simay in ay labo habeen cabsi la’aan saaxiibkeed kulmaan waana ay ogeyd in habeen dambaba ay u bilaaban doonto cabsida mar haddii Qadar uu soo laabanayo beri gelinka dambe.
Waxaa jirtay in habeenkaas uu Yaasiin mar kale oo uu ku soo qaaday Falis hadafkiisii habeen hore ay ka diiday oo uu weydiiyey waxa ay ka oraneyso walow Falis ay mar kale diiday hadana habeenkaas markii ay soo seexdeen oo cid kasta ay sariirteeda tagtay ayay Falis hadalkii u sheegtay Yaasmiin oo ay ku tiri.
Yaaska ma ogtahay in ninkii Yaasiin ahaa uu habeenadaan uu mwoduuc cusub igu keenay oo aan abid xataa ku fikirin.
Muxuu ku yiri
Waxa uu I leeyahay aan is mehersano
Yaasmiin oo markii ay warkaas maqashay sariirta ka soo booday ayaa tiri
Aan is mehersano Aaaa naayaa maxaa tiri adigana
Is deji abaayo maxaad sidaan oo dhan ugu qeylineysaa
Maxaad u qeylin waayey ma muxuu rabaa inuu reerkaada kaa gooyo aniga markii hore kuma qanacsaneyn waxaan ku dhihi lahaa kan iska moos.
Mowduucaas oo dhan ayaan iska moosay waana u sheegay in aan sameyneynin maxaa kale cabsida iska daa aniga ilmo ma ihi wax walba waan ogahay.
Walaahi aadan waxba ogeyn jaceylka ayaa dhaadhaan kaa dhigay waana hubaa inuu ku sasaban doono.
Haddii aan ogaan lahaa in sidaan oo dhan aad u xanaaqeysida maba kuu sheegi laheyn
I maqal abaayo aniga walaashey igu weyn ayaa tahay ninkaan wax kale waa uu keenaaa walaahi naftaada xataa uguma kalsooni qabo ma ogtahay in Guurka aan ehelka barakeynin in Ilaahna uusan barakeynin marnaba ha ka ogolaanin inuu ku meher xado.
Abaayo waxaas oo dhan waa ogahay mana dhaceyso
Sidii ayaa lagu kala seexday hadana Yaasmiin dhinaceeda sariirta waa qaban waayey habeenkaa oo cabsi hor leh ayaa u timid waxayna ka cabsi qabtay in Yaasiin uu mar uun ka saacid caleeyo Falis isla markaana uu la baxsado waana ay hubtay in tani haddii ay dhacdo in Falis iyo reerka ay gacan bidxeed isku salaami doonaan.
Falis qof teeda taqaan ayay aheydee maalintaa waa ogeyd in xilli kasta ay reerka soo geli karaan illinka kama tagin sidii la filaayey ayay gelinkii dambe soo laabteen.
Isku dhacii Qadar iyo Falis weli islama hadlin Qadar oo ahaa qofka ka qalbi jilicsan Falis inta uu u yimid ayuu ku yiri Abti ilaahay ha u naxariisto walow aysan si wacan aysan salaanta ugu qaadin.
Falis qof fariinka qabsatay ayay aheydee sidii ay nafteeda ku waansatay ayay yeeshay oo xataa banaanka guriga oo inta badan hablaha xaafada ugu yimaadaan ma aysan soo fadhiisan oo shaqadeeda haddii ay dhameyso waxa ay geli jirtay qolkeeda iyadoo inta badan telefoon isku mashquuli jirtay.
Yaasmiin iyo Mursal xiriirkooda wax isbadal kama muuqan waxayna aheyd xiriir is xushmeyn oo kaliya ku saleysan ileyn Mursal qof xushmad u haayo oo kaliya ayay u ahayd Yaasmiin oo wax jaceyl ah uma qabin waxaa uuna aaminsanaa in xushmada ay jaceyl isu badali karto.
Aadam isaga intaa war ayaa uu ku nudnudi jiray oo uu oran jirtay xiriirkaan aan magaca laheyn yuusan kula tagin gabadha rajo been ahna ha gelin oo runta u sheeg in aadan jecleyn.
Hadana Mursal kama dhageysto balse caawa Mursal waxaa sheeko ula taagan Yaasmiin oo dooneyso in ay wax badan ka ogado nolosha gaarka ah ee Mursal.
Previous articleDowladda Federaalka oo bayaan ka soo saartay go’aankii Donald Trump ee magaalada Qudus
Next articleCiidamada Puntlnad oo howl gallo ka wada dhulka buuraha ee Calmadow